खोइ गिरिजाबाबु जस्तो अग्लो व्यक्तित्व ? | ImageKhabar <!-instant articles-->
खोइ गिरिजाबाबु जस्तो अग्लो व्यक्तित्व ?
प्यारी कान्छी बहिनी जगदम्बा
ठूल्दाजुको धेरै धेरै माया
हुनत यो प्राकृतिक नियम र साँसारिक प्रक्रिया नै हो कि सधैँभरि हामी एकैठाउँमा बस्न सक्दैनौँ , बस्दैनौँ तर टाढा टाढा हुँदा भने साह्रै खल्लो लाग्छ । कुरा त हुन्छ सामाजिक सञ्जालमार्फत् र पनि भेटेर कुरा गरेजस्तो हुँदो रहेनछ । अस्तिमात्रै तिम्री ठूली दिदी नियास्रो लाग्यो भनेर आएकी थिइन् , एकरात बसेर गइन् । पक्कै सबैलाई सन्चै होला भन्ने आशा गरेको छु । बरु अस्ति तिमीले नेपालको राजनीतिक अवस्था किन सधैँ यस्तो अस्थिर भएको होला भनेर चिन्ता व्यक्त गरेकी थियौ र म हतारमा थिएँ बाहिर निस्कनका लागि, अनि मैले भनेको थिएँ, पछि कुरा गरौँला । तर भयो के भने त्यसपछि साँच्चै यहाँ धेरै राजनीतिक घटना घटेका छन् । तिमी त पहिले नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय सदस्य भएकीले पनि नेपालको राजनीतिक वातावरणको समीचीन व्याख्या पनि गर्न सक्छ्यौ । र पनि जेजे भइरहेको छ, त्यसले व्याख्याभन्दा पनि परिणामको भयावहतालाई इँगित गरेका छन् जुन तिम्रो सरोकारको विषय पनि हो ।
पहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओबादी भएर १० वर्षसम्म जनयुद्ध गरेको र हालै एमालेसँग मिसिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) भएको दलले आफूसँगै जनयुद्ध गरेको पहिलेको सहयोद्धाको दल जसलाई सरकारले कम्युनिस्ट पार्टीसमेत नभनेर विप्लब समूह भनेर मानेको छ, त्यो पार्टी या समूहलाई प्रतिवन्ध लगाएको छ । त्यसमा दोषारोपण के छ भने उनीहरुले विध्वंशात्मक गतिविधि गरे अनि प्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउबासमेतलाई मार्ने लिस्टमा राखेका रहेछन् । हुन त पुरानो माओबादी नेता तथा हाल सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको नेकपाका नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले त्यसलाई प्रचण्डले सफेद झूठ बोले, मार्ने त्यस्तो कुनै योजना नभएको स्पष्टीकरण विज्ञप्तिमार्फत् दिएका छन् । तिमीलाई थाहा छ कि छैन, अचेल विप्लब समूह भनेर भनिने माओवादी धार भूमिगत छ र भूमिगत रहँदै पहिलेको जस्तै क्रियाकलाप गरिरहेको छ । बम पड्केका छन्, चन्दा असुली हुँदैछ करोडौँको र कतिपय स्थानीय तहमा चन्दाको मागसहित राजीनामा दिनका लागि पनि दबाब दिइँदैछ । उनीहरुका अनुसार अहिलेको सरकारले दमन गर्नका लागि प्रतिवन्ध लगाएको हो ।
कुरा दमन र प्रतिवन्धको मात्र होइन बहिनी, शान्ति सम्झौतासमेत भएर तत्कालीन माओबादी जनमुक्ति सेनाको नेपाली सेनामा समायोजन पनि भएर, नयाँ संविधान पनि आएर, संघीय गणतन्त्रका लागि तीन तहको सरकारको संरचना कार्यान्वयन भएको बेलामा समेत र नेकपाको नै दुई तिहाईको सरकार हुँदा पनि के पुगेन र अझै भूमिगतरुपमा कम्युनिस्ट पार्टी रहनु पर्‍यो भन्ने हो । अनि पहिलेको जस्तै संरचना र कार्यविधिमा भूमिगत संरचनाले स्थानीय सत्ताको समेत निर्माण गरेकोमा हामी त छक्क परेका छौँ , सायद झन संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरु अझ छक्क परेका होलान् ।
भनिन्थ्यो, यो देशमा कम्युनिस्टको शासन आएपछि शान्ति हुनेछ । जनताले सामाजिक न्याय पाउने छन् र मुलुक एकप्रकारले विवादरहित, समस्यारहित र शान्तिपूर्ण सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन हुनेछ । कर्मचारीमा पनि समस्या देखिएको छ, किसानमा पनि समस्या देखिएको छ, विद्वत वर्ग पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्न थाल्यो भनेर चिन्तित छन् । पत्रकारहरु पनि उनीहरुको कलममाथि धावा बोल्न लागियो भनेर बोलिरहेका छन् र प्रधानमन्त्रीज्यू भने सबै अधिकारहरु एकै ठाउँमा केन्द्रित गरेर निरंकुश शासक बन्न थाल्नुभयो भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले विरोध गरिरहेको अवस्था छ ।
मैले तिमीलाई पत्रकार सुधीर शर्माको प्रयोगशाला भन्ने पुस्तक पढ्नका लागि भनेको थिएँ जसले पहिलको जनयुद्धकालको केही झलक दिएको थियो । सायद नपढेको भए पढ्नू । त्यो बेलामा पनि तत्कालीन माओबादी दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थिएन क्यारे । उसका विध्वंशात्मक गतिविधि बढ्दै गएपछि मुलुकमा संकटकाल पनि लाग्यो र नेताहरुलाई जिउँदो वा मरेको पत्ता लगाउनेलाई लाखैाँको पुरस्कार पनि घोषणा गरिएको थियो । उनीहरु नेपालमा नै भूमिगत थिए । त्यतिमात्र होइन, हामीले कतै देख्यौँ भने या हाम्रा स्कुल वा कलेजमा अखिल क्रान्तिकारी आए भने पनि कसैले भनेका थिएनन् । जनता माओबादीबाट पनि प्रताडित थिए, सरकार पक्षबाट या भनौँ प्रहरी र सेनाबाट पनि प्रताडित थिए । अहिले त्यस्तै अवस्था आउँछ कि भनेर नेपालीहरु आत्तिएका छन् । शान्तिपूर्ण अवस्थामा आएर मन्त्री भएका वा साँसद भएकाहरु नै अहिले भूमिगत भएर त्यही पहिलेको जस्तै अवस्था सृजना गर्न थालेकोमा सरकारबाट बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले व्यवहार होला भनेर अपेक्षा गर्नेहरु चिन्तित भएका छन् । पहिलेकै युद्धको वारेमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप हुन सकेको छैन, सरकार र माओबादी दुवै पक्षबाट भएका ज्यादतीको परिपूरण त के छानबिन समेत हुन नसकेको अवस्थामा फेरि त्यस्तै घटना दोहोरिन थाल्यो भने के होला भनेर सबै हामी चिन्तित छौँ ।
हिजो पो गिरिजाबाबु हुुनुहुन्थ्यो जसले राजाको पनि सेखी तोडुनु भयो र माओबादीलाई पनि सम्झाएर , बुझाएर प्रजातन्त्रको मूलधारमा ल्याउनु भयो । सबैभन्दा बढी काँग्रेसीमाथि नै प्रहार हुन्थ्यो माओबादीबाट किनभने उनीहरु सँसदीय प्रजातन्त्रको विपक्षको स्कुलिङ् चलाउँथे । उनीहरु शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए भनेको त त्यहीँमध्येबाटै अहिले विप्लव समूह आएको हो । हतियार पहिले नै चोरेर लगेको थियो र तिनै हतियारको प्रयोग अहिले हुन थालेको हो भभन्नेहरु पनि पहिलेकै माओबादीमा छन् र ती अहिले सरकारमा मन्त्री छन् ।
खासमा नेपाली काँग्रेसले हो हिजोका दिनमा माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा डोर्‍याएको । आफ्नो दल फुटेर राजाको लहैलहैमा लागेर सरकार बनाउन जाँदा पनि गिरिजाबाबुले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नुभएको थियो र ८३वर्षको बृद्ध युवाझैँ आन्दोलनमा खट्नु भएको थियो । अहिले सम्झँदा पनि छक्क , अचम्भ र सपनाझैँ लाग्छ, गिरिजाबाबु सम्झँदा । उहाँमा कस्तो आँट थियो भने सबैभन्दा बढी काँग्रेसीहरु माआाबादीबाट मारिएका छन् र पनि आफू तिनीहरुलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याएर दोहोरो भूमिका रहेका राजालाई प्रजातन्त्रको शिक्षा दिने आँट देखाउनु भएको थियो । बम पड्कँदै थिए, बन्दुक ताकिँदै थियो एउटा नेपालीले अर्को नेपालीमाथि । तर यसो गर्दा यो मुलुकको अस्मिता नै रहने छैन भन्ने चिन्ताले माओबादीसँग १२ बुँदे सम्झौता पनि भएको थियो, वृहद शान्ति सम्झौता पनि भएको थियो र सँसदमा काँग्रेस, एमाले सरह साँसद संख्या दिएर भए पनि मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनु भएको थियो ।
एकातिर त्यस्तो अग्लो राजनीतिक व्यक्तित्व पनि नरहेको , सरकार पनि दुई तिहाईको बनेको तर सरकारमा राजनीतिक सुझबुझ भन्दा नियन्त्रणमुखी सोच भएकोले पनि समस्या एकपछि अर्को आएको हो । यसका प्रतिपक्षको रुपमा नेपाली काँग्रेसमा पनि सरकारलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने नैतिक बल नभएको देखियो ।
तिमीहरुलाई बाहिरबाट हेर्दा लाग्छ होला, मुलुक ठीकसँग चलिरहेको छ । या साह्रै बिग्रिएको छ । न त राम्रोसँग चलेको छ , न त नराम्ररी बिग्रेको छ । झन अलमल, झन अन्यौल र झन विवाद बढ्नचाहिँ थालेको ठीक साँचो हो ।
अब हुनुपर्ने के हो भने विप्लब समूहले पनि मुलुकको धरातलीय अवस्था बुझेको छ , सरकारले त झन नबुझ्ने कुरै भएन , प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसको एउटा कुरामा भने शंका गर्ने ठाउँ छैन प्रजातन्त्रको पक्षमा चाहिँ । अहिलेको संविधानले संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भनेर मानेको छ । त्यसको पक्षमा सबै लाग्नु जरुरी त छ तर सरकारका कतिपय विवादजन्य क्रियाकलापले तीन तहको सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरु केन्द्र सरकारको शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने कामको विरोधमा देखिएका छन् एकातिर भने एउटै पार्टीको बाहुल्यता तीनओटै सरकारमा हुँदा पनि अपेक्षित काम हुन नसकेकोमा सबै चिन्तित हुनु स्वाभाविकै हो ।
यस्तो बेलामा सबैले अग्लो राजनीतिक व्यक्तित्वको अपेक्षा गरेका छन् । दुर्भाग्यवश अहिले कोही पनि विश्वासका साथ र इमान्दारिताका साथ मुलुकको पक्षमा बोल्न पनि सकेको छैन र यसै हुनुपर्छ भनेर मुलुकलाई बाटो देखाउन पनि सक्ने कुनै राजनेता देखिएको छैन । यस्तोबेलामा यदि राजनीतिक आन्दोलनहरु हुन लागेमा कसले सही नेतृत्व दिएर मुलुकलाई भड्खालोमा जाकिन जोगाउला ? त्यस्तो आन्दोलनलाई अराजक हुनबाट जोगाउँदै राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका पक्षमा कसले अनुवाद गराउला ? यदि विप्लव समूहले पहिलेको माओबादीले जस्तै जनसत्ता चलाउन थालेको अवस्था र भूमिगतरुपमा जनयुद्ध चलाउन थालेमा कसले व्यवस्थितरुपमा सहजीकरण गर्ला ? हामीलाई यी चिन्ता त पक्कै लागेको छ ।
तिमी पनि बुझ्झकी छ्यौ । राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेकी छ्यौ । भोलि पनि आएर सँसदीय प्रजातन्त्रका पक्षमा नै लाग्ने हौली । आफ्ना विचारहरु पनि लेखेर पठाउनू । गिरिजाबाबु र सुशील कोइराला नभएको नेपाली राजनीति साँच्चै नै उराठलाग्दो भएको छ । तिमी भन्थ्यौ नि, सुशील दाइ बाहेक अर्को कुनै राजनेताले पनि संविधान घोषणा गराउन नसक्ने रहेछन् दाजु । वास्तवमा अहिले सबैले त्यही भनिरहेका छन् ।
हाम्रो त चाहना के छ भने विप्लवले पनि विध्वंशात्मक गतिविधि छोडून् , सरकारले पनि प्रतिवन्ध लगाउनु भन्दा पनि वार्ता गरोस् । लगानी सम्मेलनसम्मलाई त प्रतिवन्ध लगाउला नै सरकारले पनि । तर कतै दर्ता नभएको अनि भूमिगत कार्बाही गर्नेलाई के को प्रतिवन्ध ? तर नेपालको माटोमा नै राजनीति गर्नेले सबै कुरामा होस पु¥याउनु नै पर्छ । हामी त दाँतहरुका बीचको जिभ्रो जस्तै छौँ, धेरै जटिलताहरुसँग जुधेर हाँसी हाँसी बाँचिरहेका नेपाली । त्यसको पछिल्लो उदाहरण भनेको भारतीय नाकाबन्दी खप्ने नेपाली हामी नै हौँ ।
जे होस्, तिमीले राजनीतिको कस्तो अवस्था छ भनेर सोधेकोले यसो आफ्नो धारणा लेखेको मात्र हो । अरु त तिमी आफैँ जानिफकार छ्यौ ।
यहाँ केटाकेटीहरु तिमीलाई सम्झिरहेका छन् । यो दसैँमा त पक्कै आउनू । अझ गर्मी विदामा आए हामी धेरै खुसी हुनेछौँ । सधैँजस्तो भेट नभएको पनि एकाध महिना भयो ।
यदि कुनै कुरामा स्पष्ट हुन चाहेमा मलाई मेल गर्नू । म आफूले जानेको कुरा लेखेर पठाउने नै छु ।
अरु भेटमा ।
तिमीलाई धेरै माया गर्ने ठूल्दाजु